Mihamalemy noho ny ady amin’ny fampihorohoroana ny fiarovana ny Zon’olombelona ao Tonizia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Aogositra 2015 5:31 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Español, русский, English
Manao famoretana amin'ny zo sivika sy politika ny governemanta Toniziana eo ampiadiana amin'ny fiakaran'ny fikomiana Islamista taorian'ny fanafihana fampihorohoroana nahafatesana olona be indrindra teo amin'ny tantaran'ny firenena.
Tamin'ny 26 Jona, vahiny mpizaha tany 38 no namoy ny ainy raha nitifitra ireo mpizaha tany teny amoron-dranomasina tao an-tanànan'i Sousse ny lehilahy iray mitam-piadiana antsoina hoe Seifeddine Rezgu. Telo volana talohan'izany, mpizaha tany 21 sy polisy manamboninahitra iray no namoy ny ainy tamin'ny fanafihana ny Tranombakoka Bardo ao Tunis renivohitra. Nilaza fa tompon'andraikitra tamin'ireo fanafihana roa ireo ilay milaza tena fa Fanjakana Islamika (ISIS).
Nanomboka tamin'ny 2011, miaramila sy polisy am-polony no namoy ny ainy tamin'ny fanafihana nataon'ireo vondrona mpikambana amin'ny Al-Qaeda ao Maghreb Islamika, indrindra tao amin'ny faritra be tendrombohitra ao Chaambi miaraka amin'ny sisin-tanin'i Alzeria, izay mavitrika aok'izany ny Borigady Okba Ibn Nafaa.
Raha mbola miady amin'ny korontana, ady sy ny fitondran'olo-tokana ireo firenena hafa ao amin'ny faritra, matetika faritana ho “tantaran'ny fahombiazana” amin'ilay antsoina hoe Lohataona Arabo i Tonizia. Hatreto dia milamindamina ny tetezamita ao amin'ny firenena na dia mbola tsy feno aza indrindra ny eo anivon'ny andrim-panjakana demokratika sy ny fitsarana tetezamita. Tamin'ny volana Janoary 2014, namolavola lalampanorenana manandratra ny zo sivily ny antenimieram-panorenana. Tsy ampy herintaona taty aoriana, nisy ny famindram-pahefana milamina raha natolotry ny antoko Islamista Ennahdha hoan'ny mpifanandrina aminy, antoko laika Nidaa Tounes ny fahefana, taorian'ny fandreseny tamin'ny fifidianana solombavambahoaka sy filoham-pirenena.
Saingy ankehitriny, rahonan'ny politikan'ny manampahefana amin'ny ady amin'ny fampihorohoroana ny dingana demaokratika sy ny fivoaran'ny zon'olombelona ao Tonizia.
Saka alohan'ny ampidirana azy am-ponja: ‘Tsy miraharaha ny zon'olombelona aho. Tsy miraharaha ny fahalalahana aho. Tsy miraharaha revolisionina aho. Te ho voaaro fotsiny aho.” Mpiandry fonja: “Afa-po? Vaaro tsara ianao izao.” Sariitatra avy amin'i Nadia Khiari.
Valo andro taorian'ny fanafihan'i Sousse, nanambara ny Filoha Beji Caid Essebsi fa latsaka an-katerena ny firenena, nanome fahefana hoan'ny manampahefana hametra ny fihetsiketsehana sy ny fitokonana, manenjika ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety ary manome fahefana bebe kokoa ny miaramila sy ny polisy. Mety ahazoana sazy enimbolana an-tranomaizina ny fanitsakitsahana ny fahalatsahana an-katerena, izay naharitra 60 andro mahery. Tsy niandry ela anefa ny fitsarana ao amin'ny faritra afovoan'i Gafsa nanameloka ireo mpikatroka 13 higadra 16 andro an-tranomaizina noho ny fanitsakitsahana ny fahalatsahana an-katerena tamin'ny alalan'ny fanatontosana fitokonan'ny mpiasa.
Ho an'ny mpitsikera, dia noho ny “fikasan'ny manampahefana hanasazy ireo fitokonana sy fihetsiketsehana fa tsy ny hiady amin'ny fampihorohoroana no nametrahana ny firenena ho latsaka an-katerena.
Firenena latsaka an-katerena tsy misy idiran'ny “ady amin'n fampihorohoroana” fa mandrava ny fandraisana anjara demaokratika
Nandritra ny resaka nifanaovana tamin'ny Independent, niezaka nanamarina ity famoretana ity ny Praiminisitra Habib Essid. “Mba hiarovana ny demaokrasiantsika vao mitsiry no anton'izany”, hoy izy. “Tsy mahazo manao fihetsiketsehana na mamonjy fitokonona izy ireo, saingy afaka maneho hevitra amin'ny fomba hafa. Afaka miteny na manoratra [izay tiany] ny vahoaka
Saingy na dia teo aza ny fanomezana antoka nataon'ny Praiminisitra fa “afaka miteny sy manoratra izay tiany ny vahoaka,” mbola manasazy ny fanehoan-kevitra ihany ny manampahefana.
Tamin'ny 8 Jolay, nosazian'ny fampanoavana ho manana firaisana tsikombakomba mandika ny lalàna miady amin'ny fampihorohoroana nivoaka tao amin'ny firenena tamin'ny 2003 i Noureddine Mabrki, tonian-dahatsoratra ao amin'ny tranokalam-baovao akherkhabaronline.com noho izy namoaka ny sarin'ilay lehilahy tao Sousse mitam-piadiana antsoina hoe Seifeddine Rezgui mivoaka ny fiara alohan'ny hanaovany ny asa ratsiny (vono olona). Navoaka tamin'ny 5 Jolay, nofafana avy eo ilay sary noho ny fangatahan'ny manampahefana, izay mitady ny fihaviany. Noho ny fandavany tsy hilaza izay niavian'ny sary dia mety higadra 5 hatramin'ny 12 taona an-tranomaizina i Mbarki.
Sarin'ny praiminisitra Habib Essid namboarina nitondra angady
Voampanga tahaka izany ihany koa i Abdelfatteh Saied, mpampianatra matematika izay nilaza tao amin'ny Facebook fa teti-dratsy nataon'ny mpitandro ny filaminana ny fanafihana tao Sousse. Na dia notanana nandritra ny ora vitsy tany amin'ny polisy aza i Mbarki, nogadraina nanomboka tamin'ny 16 Jolay kosa i Saied. Voampanga ho “manondro mpiasam-panjakana ho manitsakitsaka lalàna tsy misy porofo ihany koa izy” araka ny Andininy faha-128 ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana noho ny fizarana sy fanehoan-kevitra tamin'ny sarin'ny Praiminisitra Habib Essid namboarina. Mpisera hafa no namoaka voalohany ilay sary mampiseho an'i Essid milanja angady. Tamin'ny 12 Jolay, nozarain'i Saied tao amin'ny Facebook-ny avy eo ilay sary miaraka amin'ny fanehoan-kevitra mikasika ny fanapahan-kevitry ny mpandamina fandaharana hanakatona ireo radio sy fahitalavitra ara-pivavahana maromaro. Hoy izy: “[Toa] miandry sy mangetaheta ny hitrangan'ny heloka bevava tao Sousse izy ireo [ny governemanta], mba hanakatonana ireo loharanom-baovao rehetra avy amin'ny Silamo tony fihetsika. Toa tahaka ny fanomezana azon'izy ireo avy any an-danitra izany”
Miahiahy ny lesoka amin'ilay lalàna vaovaon'ny ady amin'ny fampihorohoroana izay nolanian'ny parlemanta tamin'ny 25 Jolay ihany koa ireo mpikatroka sy vondrona mpiaro ny zon'olombelona. Ity lalàna vaovao ity no solon'ny lalàna 2003 nolaniana nandritra ny fitondrana jadon'i Zine el Abidine Ali izay nanenjehana ireo olona 3000 ahitana mpanohitra politika.
Mamaritra ny fampihorohoroana amin'ny ankapobeny ny lalàna 2015, manitatra ny faharetan'ny fanagadrana vonjimaika (alohan'ny fitsarana) ho 15 andro raha enina andro izany tamin'ny lalàna teo aloha, ary manolotra fanamelohana ho faty hoan'ireo voaloheloka amin'ny fampihorohoroana mitarika fahafatesana na fanolanana. Mbola tsy nanafoana ny fanasaziana ho faty i Tonizia, saingy tsy manolotra fanamelohana ho faty ho sazin'ny heloka fampihorohoroana ny lalàna 2003.
Manome fahefana miavaka bebe kokoa hoan'ny sampandraharaham-piarovana ny lalàna hanakanana ara-potoana ny fifandraisan'ireo ahiahiana (na fifandraisana amin'ny finday na antserasera), mandritra ny fe-potoana tsy mihoatra ny efa-bolana, rehefa mahazo didy nosoratan'ny mpitsara mpanao fanadihadiana na mpampanoa lalàna. Ankoatra izany, sazy an-tranomaizina hatramin'ny dimy taona no azon'ireo olona hita fa “nankatò an-karihary sy imasom-bahoaka” ny heloky ny mpampihorohoro, ireo nahavita izany ary ireo vondrona fampihorohoroana.
Ftaovana mahery vaika eo am-pelatananan'ny rafi-piarovana sy ny fitsarana mpanao kolikoly ny lalàna miady amin'ny fampihorohoroana ao Tonizia. Handravarava ny vokatr'izany.
Mahafinaritra hatrany ny mahita ireo olom-boafidy mandraraka ny poizin'izy ireo, mifidy lalàna manimba ny fahafahana ary mody any an-trano miaraka amin'ny fahatsapana fa nahavita adidy
Feno fiampangana ho manao fampijaliana [izay voampanga] ihany koa ny politikan'ny governemanta miady amin'ny fampihorohoroana.
Tamin'ny fanambarana nivoaka tamin'ny 5 Aogositra, nanamafy ny Ligin'ny Zon'olombelona ao Tonizia fa olona dimy voarohirohy nogadraina noho ny fiampangana ho nanao fampihorohoroana no nampijalijaliana raha mbola tany am-ponja. Na dia nanome baiko ny hamotsorana azy ireo miaraka amin'ny voarohirohy roa hafa tamin'ity rahahaha ity aza ny mpitsara tamin'ny 4 Aogositra, mbola nosamborin'ny polisy manao fitafiana sivily tsy misy didy fampisamborana ihany izy ireo, raha iny handeha hivoaka ny fitsarana iny.
Nandritra izany herinandro izany, mpitsara iray hafa nanome baiko ny famotsorana ireo olona sivy voarohirohy tamin'ny fanafihana tao amin'ny Tranombakoka Bardo, izay azo tamin'ny alalan'ny fampijaliana ny fiaiken-keloka.
Mpanao gazety Toniziana Yasmine Ryan nisioka momba ny raharaha:
Navotsotra avokoa ireo sivy voarohirohy nogadraina noho ny fanafihana ny Bardo, anisan'izany ilay voalaza fa atidoha nikotroka ny fanafihana. Tsy misy ny porofo
Nilaza ny mpitsara Toniziana iray fa vokatry ny fampijaliana ny fiaiken-keloka voalaza fa azo taorian'ny fisamborana ireo olona 9 voarohirohy tamin'ny raharaha #Bardo
Ny fomba natao nampiasa fampijaliana hahazoana fiaiken-keloka no midika fa olon-kafa no nosamborina noho ny raharaha #Bardo, mamela ireo tena meloka hiriaria mba hikotrika fanafihana hafa.
Tao amin'ny bilaogy iombonana Nawaat, nanoratra i Hend Chennaoui fa nanamarika ny “fitomboan'ny herisetran'ny polisy” ny vondrom-piarahamonim-pirenena hatramin'ny nanambaran'ny governemanta ny ady amin'ny fampihorohoroana. Hoy koa izy:
Mandritra izany fotoana izany, toa tsy mahita fifandanjana eo amin'ny fampidirana ny demaokrasia sy ny fiadiana amin'ny fampihorohoroana ireo mpanapa-kevitra ao amin'ny firenena.